STP Forex Broker - Shirkada Central Central Clearing Company (FXCC)
Daawo fiidiyoow dhan
Browserkaaga ma taageerto fiidiyowga HTML5.
FXCC waxaa lagu aasaasay 2010 koox ka mid ah xirfadlayaasha suuqyada sarrifka lacagaha, oo dhisaya waayo-aragnimadooda dheer ee suuqyada maaliyadeed, waxay ku dadaalayeen inay abuuraan adeeg iyaga oo ku saleysan heerarka sare ee ay u baahan yihiin macaamiisha. Shirkaddu waxay ka koobantahay koox gaar ah oo xirfadlayaal ah oo leh khibrad ballaadhan oo dhinaca warshadaha maaliyadeed.
Si aad u bixiso talada ugu muhiimsan ee macaamiisha ee ku saabsan warshadaha. Waxaa naga go'an inaan ku guuleysanno macaamiisheena, adoo bixiya qiimaha tartanka, adoo adeegsanaya qaabka ugu dhaqsiyaha badan uguna hufan nidaamka suuqa iibka forex. Hadafka ugu weyn ee FXCC waa in lagu xoojiyo macaamiishiisa dhammaan qalabka ay u baahan yihiin, si ay u horumariyaan xirfadahooda, inta ay ku raaxaysanayaan waayo-aragnimo ganacsi oo aan rasmi ahayn, inta lagu guda jiro tallaabo kasta oo safarkooda ah.
Aaminto, kalsooni iyo bandhig
FXCC ee qaabka ECN / STP waxay bixisaa xirfadleyaal, ganacsatada firfircoon, macaamilka dhaqaalaha qashinka iyo macaamiisha shirkada leh helitaanka waqtiga dhabta ah iyo qiimaha tartanka tooska ah ee bixiya bixiyeyaasha xisaabaadka saamiyada badan leh.
Qaabka ECN / STP wuxuu siinayaa macaamiisha FXCC xoriyada ah in ay ka ganacsato heer ciyaareed heer sare ah. FXCC waxa ay si adag u shaqeyneysay in adduunka oo dhan ay ka dhigto mid hufan oo hufan oo la xakameynayo ganacsatada.
Nidaamka Ganacsiga ee la qoondeeyey wuxuu ku salaysan yahay Isticmaalka Qaabdhismeedka Dhaqdhaqaaqa (STP), halkaas oo dhammaan amarrada macmiilka FXCC loo diro hay'adaha tartanka iyo kuwa aqoonta leh, oo laga takhalusi karo suurtagalnimada qiimaha qiimaha, ama khilaaf kasta ee danta macaamiishiisa.
Nidaamka fulinta "Failure Desk" ee FXCC ayaa ku yimid iyada oo aan jirin wax ganacsi ah iyo wax dib-u-celin ah. Khabiirada macmiilka waxaa lagu sameeyaa qiimaha la siiyay FXCC ee bixiyeyaasha xisaabta. Qiimaha Aggregator wuxuu si toos ah u tijaabiyaa kuwan si ganacsatada loo hubiyo in ay waligood helaan helitaanka ugu fiican ee Bid / Askar qiime ah, hubinta in amarrada oo dhan lagu fuliyo habka dhabta ah tartanka iyo hufan.
Maxaad u xaddidan tahay heerka caadiga ah marka aad awooddo
miyuu khibrad u leeyahay?
Khibrad & La aasaasay
Laga soo bilaabo dhinaca ganacsatada tan iyo 2010, ka dib qaababka iyo hababka ugu wanaagsan ee lagu daboolayo baahidaada
Qaadashada heerar sare oo waayo-aragnimo iyo aqoon ah, waxaa naloo siiyaa inaan fahanno macaamiisheena baahidooda iyo in aan taageerno ganacsatada si ay u gaaraan hamigooda iyo ujeedooyinka maalgashiga. By bixinta suugaanta gaarka ah ee khayraadka, heerka VIP heerarka, oo ay weheliso taageero heer caalami ah 24 / 5, deegaankeena ganacsiga qiimaha jaban wuxuu siinayaa saldhig ku habboon si loo guuleysto.
Fulinta STP run ah
Diirad gelisey hoos u dhigista kharashka ganacsiga si eber iyo ugu badnaan kartidaada ganacsi
Waxaa naga go'an inaan ku guuleysanno macaamiisheena, adoo bixiya qiimaha tartanka, adoo adeegsanaya qaabka ugu dhaqsiyaha badan uguna hufan nidaamka suuqa iibka forex. ECN XL, oo ​​sidoo kale loo yaqaan xisaabta ZERO waa mid ka mid ah xisaabaadka ganacsi ee ugu kharashka badan.
Shirkadda Maalgashiga ayaa diiwaangashan
ee Jamhuuriyadda Vanuatu
oo leh lambarka diiwaangelinta 14576.
FX CENTRAL CENTRAL CLEARING Ltd
Ogolaansho iyo nidaamis ay samaysay CySEC
sida shirkadda maalgelinta Cyprus (CIF)
oo leh lambarka ruqsadda ah 121 / 10.
Eeg dhammaan Xubinnimada iyo Diiwaangelinta
Ganacsatada '# 1 Doorashada
Waxay muujiyeen ganacsatada & xirfadlayda warshadaha
Wareegyada Zero *
Khidmadaha Zero Deposit
HESHO LACAG LA'AAN * Shuruudaha iyo Shuruudaha waa la dabaqayaa
Ma rabtaa inaad waxbadan ka barato?